Ampanihy Andrefana : tsy ampy ny orana, ahina ny hisian’ny kere | NewsMada
Ampanihy Andrefana : tsy ampy ny orana, ahina ny hisian’ny kere
Miaina ao anatin’ny haintany tanteraka izao iny faritra atsimo iray manontolo iny, anisan’izany ny distrikan’Ampanihy Andrefana. Tamin’ny sasak’alin’ny Noely nisy orana farany, mba nahafahan’ny olona namboly. Amin’izao anefa, tsy nitohy ny orana ka hainandro sy hafanana migaingaina mamono ny fambolena rehetra, toy ny tsako, antsoroko, sns. Vokany, manahy ny mponina any an-toerana ny hisian’ny kere, satria ny vokatra mba nantenaina, maty daholo ary etsy ankilany ny fidanganan’ ny vidim-piainana.
Kaominina vitsivitsy toy ny ao Fotadrevo, Maniry, Ankilizato no mba ahitana orana, saingy tsy ampy. Tsy misy atao sakafo, ny tsako, voatango, hiandrasana ny vokatra mampidi-bola, ohatra, ny antsoroko sy kapiky izay antenaina tokony hiakatra amin’ny volana marsa izao. Araka izany, hihena betsaka ny vokatra, raha hisy, noho ny tsy fahampian’ny orana ka matahotra ny mponina ny hisian’ny kere. Ny tena efa iharan’izany, ny tapany andrefan’ny distrika izay efa mihinana raketa mena noho ny tsy fisian’ny sakafo. Tena atahorana ny hofirongatry ny aretina mahazo ny ankizy.
Manoloana ny zava-misy, manao antso avo ny mponina amin’iny faritra iny mba hijerena azy ireo, satria tsy azo ialana ny mosary raha mitohy izao tsy fihavian’ny orana izao. Mba hialana amin’ny vonjy tavanandro no nanaovana izao fanairana izao, hikarohana vahaolana maharitra hiadiana amin’ny tsy fahampian’ny rotsakorana. Afaka mamboly ny olona ka ho voky raha ampy ny rano.